प्रधानमन्त्रीको टिममा ‘एक्टिङ डाइरेक्टर’को कमी ! (भिडियो सहित) | Kendrabindu Nepal Online News
11219793 529601 4326496 6363696
प्रधानमन्त्रीको टिममा ‘एक्टिङ डाइरेक्टर’को कमी ! (भिडियो सहित)
१ चैत्र २०७६, शनिबार १३:५९
१२ दिनको अस्पताल बसाइपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार (३० फागुन) घर फर्किए । यो १२ दिन विगतमा उनी अस्पताल बसेर फर्के जस्तो सामान्य चाहिँ पक्कै थिएन । तर, यसलाई जबर्जस्ती सामान्य बनाउन खोज्दा भने सही संदेश प्रवाह भएन । यस्तो बुझिन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको टिममा ‘एक्टिङ डाइरेक्टर’को कमी छ ।
‘डिस्चार्ज’पछि प्रधानमन्त्रीलाई हिडाउँदै गाडी भएको ठाऊँसम्म लगियो । तीनतिरबाट पकडेर उनलाई अघि बढाईदै गरेको जो कोहीले देखे । एक पटक नमज्जाले धर्मराए प्रधानमन्त्री । किनभने त्यहाँ सानो खुड्किलो जस्तो थियो । जसलाई सजिलै नाघ्न सक्दैनथे उनी । त्यसैले धर्मराए ।
तर, प्रधानमन्त्री तन्दुरुस्त भएको देखाउनु थियो, सायद उनको ‘किचन क्याबिनेट’लाई । किनभने मिडिया जो बोलाईएको थियो । र, मिडिया मार्फत नै प्रधानमन्त्री तन्दुरुस्त भएको संदेश पठाउनु पनि थियो ।
तर, ‘किचन क्याबिनेट’ सफल भएन, सोचेजस्तो संदेश प्रवाह गर्न । किनभने दोस्रो पटक मिर्गौला फेरेका प्रधानमन्त्रीलाई ‘थिग्रिन’ नै मुस्किल परिरहेको थियो । र, भिडियो हेर्ने जो कोहीले उनलाई हिडाएकोमा निको मानेनन् । त्यो दृश्य जर्बजस्ती गरिएको बुझिन्थ्यो ।
त्यसो त ‘बडिल्याङवेज’को सवालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समकालीन राजनीतिज्ञका तुलनामा माथि नै लाग्थे । भारत भ्रमणमा समकक्षीको अगाडि उनी सम्राट शैलीमा प्रस्तुत हुँदा संसारका नेपालीले शिर ठाडो पारे । अरुबेला पनि उनले ‘पर्फेक्ट’ प्रस्तुति दिँदै आएका थिए । गत फागुन मसान्तका दिन अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ हुँदै गर्दा भने उनी चुके । हिडेर देखाउनुपर्छ भनेर सल्लाह दिनेहरुप्रति दर्शक क्रुद्ध बने । मानौं ‘ह्वीलचेयर’मा राखेको भए बर्बाद नै हुन्थ्यो ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले यी ४ पक्षलाई देखाउनु नै थियो
प्रधानमन्त्री ओली अब सक्रिय हुन सक्लान् वा नसक्लान् भन्ने दोधारमा छन्, आम नेपाली । त्यसैले उनीहरुलाई ठिक भएको संदेश दिनु थियो ओली र उनको ‘किचन क्याबिनेट’ले । त्यसैले अस्पतालबाट घर फर्किने दिनलाई नै मौका मानेर सदुपयोग गर्ने योजना बनाइएको हुन सक्छ ।
आफूलाई बौद्धिक वर्ग दावी गर्नेहरु भन्दै छन्, ‘केपी ओली विरामी पर्न सक्छन् । तर प्रधानमन्त्रीलाई विरामी हुने छुट हुँदैन ।’ यो सत्यबोध प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि थियो । त्यसैले उनी तन्दुरुस्त भएको संदेश दिन चाहन्थे ती तमामलाई ।
प्रधानमन्त्री ओली नेकपाका अध्यक्ष समेत हुन् । उनी दिर्घरोगी भएको खण्डमा सक्रिय राजनीतिका सम्बन्धमा बिचार गर्नुपर्छ भन्नेहरु पार्टीभित्र पनि सक्रिय हुन थालेका छन् । तिनीहरुलाई आफू तन्दुरुत भएको बताउनु थियो, ब्यवहारबाट ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘नर्मल’ मान्छे जस्तो हुन ६ महिनादेखि १ बर्षसम्म लाग्छ भनेर उनकै निजी चिकित्सकले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि ओली र उनको ‘किचन क्याबिनेट’ नमज्जाले झस्कियो । सायद उनीहरु ‘मेडिकल साइन्स्’लाई पनि गलत देखाउन चाहन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली घर फर्किने दिन विवादमा पर्नुको मुलकारण उनलाई किन हिडाईयो भन्ने नै हो । जसको संभावित कारण माथि उल्लेख गरियो । अब प्रश्न उठ्छ, ‘ह्विलचेयर’मा राखेर गाडीसम्म पुर्‍याउँदा चाहिँ कस्तो संदेश जान्थ्यो ?
दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको विरामीलाई घर फर्काउँदा ‘ह्विलचेयर’ स्वभाविक नै लाग्थ्यो । प्रधानमन्त्रीलाई मिर्गौला दिने समीक्षा संग्रौला ‘ह्विलचेयर’मा नै घर फर्केकी थिइन् । त्यो दृश्यले पनि ओलीको घर फर्काइलाई ‘ह्विलचेयर’ स्वभाविक बनाइसकेको थियो । स्वभाविक नभएपनि त्यो तत्कालीन स्थिती हो भन्ने बुझाउन सकिन्थ्यो । उनी ‘ह्विलचेयर’ बसेर हात उठाउन सक्थे । मुस्काउन सक्थे । यत्तिले नै पुग्थ्यो ।
धर्मराउँदै हिड्दा जर्बजस्ती गरेको जुन संदेश गयो यसलाई काट्न अरु धेरै ‘फण्डा’हरुको ‘क्रिएसन’ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जे गरेपनि जर्बजस्ती गरिएको संदेशले निरन्तरता पाउन सक्छ ।
अर्को कुरा अब फेरि अस्पताल जानु–आउनु परेको खण्डमा ‘ह्विलचेयर’ प्रयोग गर्नुपरे झनै गलत संदेश जान्छ । त्यतिबेला अवस्था तल झरेको बुझिनेछ । हिडाए पनि त्यसैको निरन्तरता बुझिनेछ ।
‘एक्टिङ डाइरेक्टर’ भएको भए, शुक्रबार साँझ त्यति हदसम्म ‘एक्स्पोज’ हुन्न थियो, सायद ।
एक्टिङ डाइरेक्टर, केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री, मिर्गौला प्रत्यारोपण
Prevरोकिएन टिपर आतंक, भक्तपुरमा १८ महिने बालकको मृत्यु
प्रचण्डले लिए प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अपडेटNext
निगमका पाइलट टिमलाई सोल्टी होटलमा मस्ती, आम्दानी भन्दा दोब्बर खर्च
‘कोरोनासँग जुध्न आहार, व्यायाम र उच्च मनोस्वास्थ्य महत्वपूर्ण’ : प्रधानमन्त्री
कतारमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १२३ पुग्यो, संक्रमित दर भने घट्दै
कोरोनाबाट नेपालमा थप २ जनाको मृत्यु, आज निको हुने २७२ जना
थपिए २३२ नयाँ संक्रमित, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १५,४९१ पुग्यो
यस्तो छ खोकनामा झडप हुनुको कारण
सिन्धुपाल्चोकमा ६० रुपैयाँको औषधि दुई हजार ४०० मा बिक्री !
सार्वजनिक यातायात संचालनका लागि २१ गतेपछि विकल्प खोजिने
नेकपा विवादको १० दिने टाइम लाइन, कुन दिन के भयो ?